Jery taratra… herinandro : miaka-midina, mivoaka miditra… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : miaka-midina, mivoaka miditra…
Nihena 270 Ar ny vidin’ny gaz oil, 120 Ar solika tsotra, 210 Ar ny solika fandrehitra. Fihenana fanintelo tamin’ity taona ity ireo, taorian’ny fanitsiana ny famerana ny vidin-tsolika. Nampihena izany ny fidinan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, ny fiakaran’ny sandam-bola malagasy. Na izany aza, tsy hidina ny saran-dalana.
Nofoanana ny hetra fiarovana seranan-tsambo (ACD) amin’ny fampidirana sy famoahana entana, taorian’ny fifampidinihan’ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Hisy ny fametrahana rafitra vaovao eken’ny roa tonta ao anatin’ny roa volana. Raha nifampidinihana mialoha, tsy mivoaka miditra toy izao ny raharaha.
Ho tratra ny ara-potoana ny fandraisan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, novambra 2016, raha ny fanazavan’ny delege jeneraly misahana ny fitantanana sy fanatanterahana ny fihaonana. Vitaina alohan’ny volana jolay, ohatra, ny fanamboarana ny CCI, Ivato, handraisana ny parlemantera frakôfônina.
Mazava maloka ny amin’ny hoe fiatrehana ny fiarovana sy fanaraha-maso ny sisintany amin’ny fahatongavan’ireo sambo haingam-pandeha miisa efatra hoe Mazava. Na izany aza, maloka ny fandehan-javatra fa tsy mbola nisy tratra na jerem-potsiny ireo mpanondrana andramena. Manginy fotsiny ny harena anaty rano, an-kibon’ny tany…
Nampiaka-peo ireo zanak’Androy mitaky ny fanolorana ny zanany maty notifirina tany amin’ny fitrandraham-bato Ankaraoka, Anjozorobe. Mampitandrina ny mpitondra fanjakana izy ireo amin’izany, ary manome herinandro. Ao ny zanak’Androy hafa milaza fa misy ny fanjakana mahefa: andrasana ny fitsarana.
Tafaverina an-tanindrazana ny Praiminisitra Ravelonarivo. Tsy hoe nitsabo tena izy, fa nifampiraharaha ara-toekarena sy sosialy hanampiana an’i Madagasikara: famatsian-jiro sy rano… Mba tsy hivoaka miditra ny raharaha, fa tena hiroso amin’ny fanarenam-pirenena sy fampandrosoana amin’izay? Ho hita eo…
Can – Ampahavalon-dalana: hanokatra ny fihaonana i Gabon sy i Borkina Faso 21/01/2022
Lemak’Antananarivo: ahiana amin’ny fiakaran’ny rano 21/01/2022
Fiaraha-miasa amin’ny MATSF: nahazo kamiao 10 sy « car » roa ny CUA 21/01/2022
Fotodrafitrasa iarahana amin’ny MATSF: hitohy ny fanohanan’ny mpamatsy vola ireo tanàn-dehibe 21/01/2022